Friday October 11, 2019 - 17:01:29 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka nagasoo gaaraya Sh/dhexe ayaa sheegaya in galabta dagaal xoogan oo uu ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada Jowhar sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan taliska military-ga ee Xarakada Al-Shabaab.
Deegaanka oo u dhexeeya Xawaadleey iyo Jowhar ayaa qiyaastii 9km dhanka koonfureed kaga beegan magaallo madaxda gobolka Sh/dhexe, waxaana jira khasaare xooggan oo dagaalkaas lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka DFS.
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalyahannada Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku beegsadeen maleeshiyaadka DFS oo doonayay in ay weeraro ku qaadaan fariisamayaasha ay ciidamada Al-Shabaab ku leeyihiin duleedka magaalada Jowhar.
Sarkaal ka tirsan taliska ciidanka Al-Shabaab ayaa SomaliMeMo u sheegay in dagaalkaas lagu dilay ugu yaraan todobo (7) askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabo Cabdi Xasan Dhiileey halka sidoo kalena lagu dhaawacay tiro kale.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa sidoo kale dagaalkaas ku soo furtay hub, rasaas iyo agab ciidan oo ay ka carareen maleeshiyaadka.